Notànan’ny Polisy Thailandey Ireo Mpianatra Mpanao Fihetsiketsehana Nandritra Ny Tsingeritaonan’ny Fanonganam-panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2015 13:56 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, বাংলা, čeština , bahasa Indonesia, Español, English
Mpianatra am-polony no nosamborina tao Thailand noho ny fanaovana fihetsiketsehana nandritra ny tsingerintaona voalohan'ny fanonganam-panjakana May 2014. Tamin'ny fotoana nanoratana, 48 no nogadraina noho ny fanehoan-kevitra ampahibemaso manohitra ny governemanta tohanan'ny miaramila.
Nanatontosa fanonganam-panjakana ny tafika tamin'ny 2014 mba hamaranana ny korontana ara-politika ao amin'ny firenena. Nofeheziny ny haino aman-jery ary noraràny ireo fihetsiketsehana ka anisan'izany ny fitangoronan'ny olona mihoatra ny dimy eny amin'ny toerana an-kalamanjana. Talohan'ny faran'ny taona 2014, novolavolainy ny sata vonjimaika fototra ametrahana governemanta sivily tarihin'ny miaramila voatendry. Ny lehiben'ny tafika, Prayut Chan-o-Cha no voafidy ho praiminisitra.
Nofoanan’ny tafika ny lalàna miaramila tamin'ny volana Aprily saingy mbola tazoniny ny fahefana tsy voafetra ao amin'ny governemanta.
Nitsikera ny fitsipika tafahoatran'ny tafika ilay mpanao gazety Saksith Saiyasombut :
Vondrona miantso ny tenany hoe Tanora hoan'ny Hetsika Sosialy-Demaokrasia (YPD) namoaka fanambarana manohitra ny fitondrana mpanongam-panjakana: